Hoyga & Wararka Beerta iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Bandhigyada ganacsiga ee alaabada guriga iyo beeraha
Bandhigyada ganacsiga ugu fiican uguna sarreeya ee soo bandhigaya beerta iyo agabyada guryaha waa: Guriga & Beerta Beerta Olympia London, London, UK Si aad u soo jiidasho leh u fiirso waxyaabaha ugu fiican gurigaaga iyo beertaada. Waxaa jira xulasho balaaran oo loogu talagalay dhamaan qeybaha gudaha sida qolalka fadhiga ilaa musqulaha iyo jikada, iyo waliba alaabada guryaha, […]Read More
Xageen Ka Heli Karaa Bixiyaasha Cuntada Jikada?
Su'aasha ugu badan ee la i weydiiyo markay tahay qodobkaan ayaa ah, "Xagee ka helaa alaab-qeybiyeyaal jikada wax lagu cuno?" Waxaa jira jawaabo dhowr ah tan. Waa kuwan wax yar. -Baro Internetka. Waxaa jira ilo badan oo waaweyn oo internetka ah oo ku siiya alaab adag oo la isku halleyn karo oo qiimahoodu yahay […]Read More